Date My Pet » 15 Best Twitter Accounts Kutevedzera nokuda Dating Advice mu 2015
Last updated: Jan. 24 2021 | 4 Maminitsi verenga
In edu iyezvino digitally inopepereswa vanhu, tinovimba yokuwana vakawanda mashoko edu kubva Indaneti. Vanhu vakawanda vanoshandisa munzanga vezvenhau zvikurukuru kuramba vachikurukurirana neshamwari nemhuri uye kuramba akagadziridzwa pamusoro kuitika munyika, asi chii nezvokuziva ukama zano?
Twitter inopa vanoshandisa mukana mashoko ari 140 vatambi zvichidzika dzavo nevateveri. Vanhu vakawanda akasvetukira pamusoro mukana kushandisa Twitter somunhu pamagetsi kuti kwete kubatana asi kupa mazano kune avo vanofarira kuita basa ravo.
Pane plethora zvokufambidzana uye ukama nevanyori, bloggers uye nyanzvi utilizing Twitter senzira dishing kubuda kufambidzana zano. Ini vakanyora mazita vamwe Twitter nhoroondo huru kuti Anoisa kudanana uye ukama zano. Ungave uri kutsvaka mazano sei kuvandudza yako paIndaneti kufambidzana Profile kana vari kutsvaka mazano sei kurambana yakaipa, izvi Twitter Nhoroondo ndasvitsa iwe akafukidzwa!
Saka pasina mamwe mhere-mhere, pano ari mazita (yangu anozvininipisa pfungwa) ari 15 yakanakisisa Twitter nyaya yokutevera kana muchitsvaka kufambidzana mazano:
Shannon ari wepfungwa uye kudanana uye ukama munyori uyo achangobva zvakabudisa bhuku wokurarama kunhivi nokufunganya zvokufambidzana uye anopa nzira uye unyanzvi sei kuti vazoita kuti kufunganya uye vapinde zvokufambidzana nyika. Tora Kutarira kwake Twitter chikafu kufambidzana zano nyaya uye zvirongwa.
Julie Inyanzvi tichiyambuka nyika paIndaneti kufambidzana uye kakawanda mbiru rinobatanidza kuti nyaya uye mavhidhiyo pamusoro wake ukama nhungamiro. Dzinomutevera Twitter chikafu kana uchida kudzidza zvakawanda nezvokuti unganyengetera sei kuti vazoita munyika paIndaneti kufambidzana.
Simone ari pabonde & ukama blogger uyo tackles ose zvawo nyaya dzakapiwa kwaari. Kana uri kutsvaka munyori uyo noushingi inokurukura nyaya kubvira paIndaneti zvomuzana sei kutenga seksikäs lingerie, nechokwadi kuti tarisa wake Twitter chikafu tsamba kuti akakodzera nyaya.
Aaron Horton uye Josh Nalven; Guy Friends Podcast (@TheGuyFriends)
Aroni Josh ishamwari vaviri naHama Podcast nezvezvandaifanira kufambidzana, ukama pabonde zano. Panyaya nyaya vachida kukurukura, hapana kure nemiganhu. Kana uri kuvava kunzwa kufambidzana zano kubva vaviri kusetsa uye vakatendeseka zvachose vakomana, ipapo atarire musi Twitter.
Jen ari munyori uye ukama nyanzvi anopisira mazano avo nzara kudzidza zvakawanda pamusoro nokusingaperi-nokuvhiringidza kufambidzana nyika. Iye inokurukura zvidzidzo zvakafanana kuramba akareba ukama, sei kuronga imwe zuva uye kuti ringakurirwa sei kurambana chaiko yokutanga zvinoshamisa, pakati nedzimwe dzakawanda. Mupumburu kuburikidza naye Twitter zvokudya kuwana tsamba yake kudanana uye ukama nyaya uyewo vamwe anokurumidza mazano.
April ndiye murairidzi kudanana uyo ane unyanzvi mubasa dishing panze kufambidzana zano nevakadzi pamusoro 40. Her kudanana uye ukama nyaya hunonyatsodonongodza uye anodzidzisa, kungofanana naye Twitter chikafu, saka tarisa naye kana uri kutsvaga kufambidzana mazano vakadzi vakura.
Christan ari kudanana nyanzvi uyo anonyora mbiru Uye Ndicho Sei Muri Single. Iye inokurukura nyaya kubvira sei kuti zuva rokutanga zvinoshamisa kuti zvakanakira kuroora. Iye rinokurudzirawo vateveri vake Twitter wokuita naye nokuzviisa pasi dzavo mibvunzo kufambidzana. Kana munhu kutsva kudanana mubvunzo chaunoda vakapindura, tarisa wake Twitter chikafu.
pfungwa Catalog (@ThoughtCatalog)
Pfungwa Catalog anopisira muunganidzwa kudanana, ukama uye pabonde zano nyaya zvakanyorwa mipiro akasiyana dzinoverengeka Website yavo. Nyaya yavo nguva dzose kusetsa uye zvishoma racy, saka website iyi (uye Twitter chikafu) akakwana vaya kuonga noutsinye akatendeseka kusvika.
Joshua ndiye paIndaneti kufambidzana nyanzvi uyo akanyora nyaya dzakawanda dzinotaura kwemakore anenge munharaunda yake unyanzvi. Sezvo ari ndizvirumbidze munzvimbo paIndaneti kufambidzana, iye inokurukura nyaya yakaita sei kuti kuveza kumusoro-unhu e kuti tikwanise kwako paIndaneti kufambidzana Profile. Josh kazhinji inogadziridza ake Twitter nhoroondo akakodzera nyaya, saka iva nechokwadi kuti tarisa ake chikafu kana muchitsvaka mazano pamusoro paIndaneti kufambidzana.
YourTango nderimwe Website kuti ane zvakawanda kudanana uye ukama zano nyaya akarigadzirira avo guru chikwata wevanyori. Nyaya yavo kufukidza zvose pasi pezuva pamusoro zvokufambidzana kunyikadzimu, saka tarisa yavo Twitter dzinoudya kuwana nyaya dzinokurukura zvese nezvokudanana.
Fauna ari kudanana nyanzvi uyo anopa yakadekara ukama zano kuvanhurume nevanhukadzi uye inopa nzwisiso yake pamusoro siyana nyaya kufambidzana vanhu vakawanda vakatarisana, akaita sei kutaurira kana munhu uri kufambidzana zvakanaka kuti sei kumisa yokukwezva zvakaipa vanhu. Dzinomutevera musi Twitter kuti tsamba yake nyaya uye neapo ukama vanoita jee.
dhani Savage (@fakedansavage)
Dhani ndiye munyori uye mumiriri dzakakurumbira kuzivikanwa zvepabonde zano rake Mbiru Savage Love uyewo Podcast ake Savage Lovecast, kwaakanga inokurukura chinyakare uye vasiri chinyakare ukama matambudziko. Check out ake Twitter chikafu kana muchitsvaka vamwe hilarious, risque asi dzama kufambidzana zano.
Erin ane kudanana wavakasarudza anopisira kwete chete zano Anonyorwa asiwo inoshanyirwa redhiyo zvinoratidza yake inobudisa kunzwisisa kwake pamusoro zvokufambidzana nyika. nyaya yake siyana pakutanga kutsvoda mazano kudanana pamusoro bhajeti. Dzinomutevera musi Twitter kuti tsamba kuti mavhidhiyo, nyaya uye kudanana mazano.
Antonio ari wepfungwa uye Ukama chiremba anopa zano negadziriso chipi uye marudzi ose ukama dilemmas. Tora Kutarira ake Twitter nhoroondo, sezvo kazhinji mbiru nokukurumidza ukama mazano uye prices uye anobatanidza kuti nyaya yake.
Wilma ari kudanana blogger achibayira zano dzake nezvokufambidzana pashure pokurambana, kwakavakirwa zvikuru yake pachake zviitiko. Tsvaka yake Twitter nhoroondo kana uchida kuverenga pamusoro nzwisiso vake kupinda zvokufambidzana mudziva pashure kurambana.
Visiting Key West, Florida zvako dzinovaraidza